Global Voices teny Malagasy » ‘Ny printsy kely’ amin’ny teny Tsotsil · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Desambra 2018 8:58 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela García Calderón Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Arzantina, Meksika, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Teratany, Vaovao Tsara, Zavakanto & Kolontsaina
Printsy kely, na Ch'in Ajvali amin'ny teny Tsotsil. Sary nampiasaina nahazoana alàlana.
Vao avy nanampy fiteny hafa tao amin'ny lahatahiriny ny iray amin'ireo boky be mpandika indrindra manerantany: “Ilay Printsy kely”, izay hita amin'ny teny Tsotsil, fiteny indizeny ampiasain'ny olona 400.000 ao amin'ny fanjakana atsimo-atsinanana Meksikana any Chiapas .
Navoakan'ny mpanonta boky Arzantiniana tsy miankina, Los Injunables tamin'ny Novambra 2018 ny “Ch'in Ajvali”, namoaka dikanteny Aymara  tamin'io boky io ihany koa ny Los Injunables tamin'ny taona 2016.
Nadikan'ilay poeta Xun Betan, ny dika amin'ny teny Tsotsil ahitana sary fanoharana Maya  ary koa endri-tsoratra manokana natokana ho an'io fiteny io.
Poeta Xun Betan, miantsoroka ny fandikana ny “Ch'in Ajvalil” ho amin'ny teny Tsotsil, mampiseho ny iray amin'ny boky. Nahazoana alalana.
Niresaka vetivety tamin'i Javier Merás, atidoha ambadiky ny Los Injunables, momba ity famerenana vaovao ny boky efa 75 taona nosoratan'i Antoine Saint-Exupéry ity ny Global Voices
Global Voices (GV): Ahoana no nahatongavan'ny dikan-teny Tsotsil tamin'ny “Printsy kely”?
Javier Merás (JM): Xun Betán, izay mpandika teny tamin'ity famoahana ity, dia nanomboka lasa tia mamaky boky fony izy sivy taona, ary noho ny “Printsy kely” no anton'izany. Tsy ny fifandraisany voalohany tamin'ny famakian-teny fotsiny ihany, fa nampiasa azy io koa izy mba hianatra teny espaniola. Taty aoriana dia nandray finiavana handika izany amin'ny teny Tsotsil izy, izay nataony tamin'ny fombany manokana. Ny tanjony dia ny hoe olona maro avy amin'ny fiarahamoniny no afaka namaky ilay boky.
GV: Afaka milaza ve isika fa tsy asa mora izany?
JM: Tsy izany. Efa vonona ho an'ny fanontana ny fandikan-teny, saingy ireo trano famoahana izay nifandray tamin'i Xun dia tsy nahazo tsara ireo sary nataon ‘i Héctor Morales Urbina, satria samy hafa tanteraka amin'ny endrika mahazatra izy ireo. Tamin'ny taona 2016, tamin'ny alàlan'ny “Los Injunables”, fivarotam-bokatra virtoaly tantaniko, dia nifandray taminy izahay, roa taona taorian'ny nandàvana, nandefa kopia iray taty aminay i Xun ary niasa tamin'izany izahay ary namolavola izany. Lasa mpamoaka noho ny filàna izahay.
Ny Los Injunables, trano famoahana boky misahana ity andian-dahatsoratra ity, dia tetikasam-pamonjena manokana, izay antonona tsara ny zava-drehetra. Manana boky ho an'ny jamba avy any am-ponja izahay, mpanao endri-tsoratra nanavotra ireo tarehintsoratra tamin'ny fanjanahantany ireo boky mahazatra nataon'ireo mpiteny ny teny indizeny, toy ny Printsy kely tamin'ny teny Tsotsil.
GV: Mahaliana indrindra fa ny endrika Tsotsil dia manana ny sariny manokana, sy ny fomba itazonany ny maha-izy ny nentim-paharazana izay mahazatra antsika rehetra.
JM: Marina izany, ireo sary dia tena aingam-pananahy Maya. Tolo-kevitra nataon'ny mpandika teny Xun Betán. Asan'i Héctor Morales Urbina ireo sary ireo ary manana herim-panintonana Mayana. Novokarin'i Alejandro Fiadone, izay manam-pahaizana manokana momba ny ikônôgrafia (haisary) teratany Arzantiniana, indrindra ho an'i Ch'in Ajvalil ny fonony aoriana sy ny antsipiriany hafa . Nampiasa ny tarehimarika Maya koa izahay mba hanisana ny tokon’ ny boky.
GV: Inona no nianaranao tamin'ny fandikana ny “The Little Prince” tamin'ny fiteny indizeny?
JM: Raha ny filazako azy dia efa lasa nifantoka manokana amin'ny fianarana ny fomba hifandraisana amin'ity tantara ity aho. Zavatra tsy maintsy ankasitrahako izany. Nihaona tamin'ny olona maro tsy tambo isaina aho izay nanome ahy ny finamanany, ny aingam-panahiny ary ny fanohanan'izy ireo nandritra ity dia mahafinaritra ity.
GV: Manao ahoana ny Printsy kely amin'ny teny Aymara?
JM: Notakian'ireo mpanangom-boky mafy ny “Pirinsipi Wawa”, ary mbola mitohy izany. Nisy vondron'olona Peroviana nifandraika tamin'ny fanabeazam-bahoaka nividy boky marobe ho an'ny sekoly mampiasa teny roa. Ny hevitra voalohany dia ny hanomezana boky ho ampiasaina amin'ny fitaovam-pianarana. Na izany aza anefa, tsy maintsy manantitrantitra ny zava-misy aho fa tsy fiantrana ny asanay. Manaiky izahay fa efa tapitra ny asanay, ary tsy ho ela dia hamindra ny zon'izany fanontana izany any amin'ny mpandika teny, Roger Gonzalo Segura, mba hahafahana mamoaka ny lahatsoratra ao Però ary mandeha amin'ny fombany manokana. Inona koa no azon'ny mpanoratra nofisina?
Azonao atao ny mahita fanazavana bebe kokoa ao amin'ny pejin'ny Facebook-n'ny Los Injunables - izay ahitana ity lahatsary ity milaza ny tantaran'ny fandikan-teny sy ny fizotry ny famoahana:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/06/131295/
 dikanteny Aymara: https://globalvoices.org/2016/05/20/saint-exuperys-little-prince-can-speak-aymara-now/
 fanoharana Maya: https://en.wikipedia.org/wiki/Maya_civilization
 pejin'ny Facebook-n'ny Los Injunables: http://facebook.com/LosInjunables